Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 44
Copyright, 1913, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Azo atao amin'ny alalan'ny tanana ny zavatra fototra, amin'ny alàlan'ny fomba mahagaga; Raha eny, inona no mety ho endriky ny endrika ary ahoana no anaovana azy?
Azo atao ny manana ny hery ara-tsaina sy ny fandaminana ara-tsaina ilaina mba hanomezana vatana ara-batana amin'ny alàlan'ny fizika majika amin'ny endriny tadiaviny; ary na izany aza, mety ho mora kokoa amin'ny farany ho azy ny hahazoana an'io zavatra io rehefa azon'ny olon-kafa ny tanjon'ny faniriany. Amin'ny tanana toy ny matotra dia misy tahiry fitrandrahana mineraly na endrika geometrika azo esorina amin'ny singa manan-danja. Torak'izany koa, afaka mitambatra sy mamolavola endrika matevina ny raharaha fototra.
Ny hery ara-panahy sy ara-tsaina ilaina amin'ny olona izay manome endrika ara-batana amin'ny zavatra tsy hita dia: finoana, sitrapo ary eritreritra. Ankoatr'izany, ny vatany astral dia tsy maintsy afaka mihazona ary mamokatra magnetism be loatra. Ny olona rehetra dia manana finoana, sitrapo ary eritreritra; fa, ao amin'ny mpanao ody, ireo dia tsy maintsy hatsangana amin'ny hery ambony kokoa. Tsy misy asa vita raha tsy misy finoana. Fa ny asan'ny tanana dia tsy maintsy manana finoana ny mpanao majika antsika, ary izany no fahalalana am-perinasa. Io finoana io dia mety tsy vokatry ny asany sy ny ezaka nataony ankehitriny. Ny mpanao majika antsika dia tsy maintsy manana finoana amin'ny fahaizany mampiditra an'izay tsy hita, handrenesana an-tsofina tsy azo tsapain-tanana, hahalala izay tsy azo tsapain-tanana, hamokatra ho amin'ny fahatsapana izay tsy takatry ny sainy. Raha tsy manam-pinoana izy fa azo atao ireo zavatra ireo, raha tsy manam-pinoana fa mahavita azy izy, dia tsy afaka. Raha mino izy fa mahavita manao asa majika satria misy olona milaza azy fa afaka, ny finoany dia tsy finoana. Mbola mijanona ho mino, fiheverana izany. Ho an'ny fahombiazana amin'ny asany dia tsy maintsy mivoatra ao anatiny ny finoany ary tsy ho voatarika amin'izay mety ho lazaina. Ny finoana izay tsara toa izany dia avy amin'ny fahalalana nanadino, azony taloha. Tsy tokony hitoetra ho afa-po amin'ny finoana tsy mihetsika izy, fa tsy maintsy mitondra ny lasa ho amin'ny fahalalana ankehitriny. Tokony hampiasa ny sainy izy. Raha vonona ny hampiasa ny sainy amin'ny eritreritra izy, ny finoany no hitarika azy amin'ny asa ara-tsaina sy hanome ny lalana ho lasa lasa fahalalana amin'izao fotoana izao.
Tahaka ny sary an-tsaina dia tsy maintsy hafa noho ireo antsoina hoe olona mahay manavaka ny mpanao majika antsika, satria misy sidina misy sidina. Ny atao an-tsaina dia ny mamorona sary, na ny toe-javatra izay nanamboarana ny sary. Ny sary namboarin'ny mpanao majika antsika dia sary ara-tsaina ary, rehefa vita, dia tsy mora simba toy ny tanimanga na zavatra ara-batana hafa. Ny sarin'ny mazoto magy dia sarotra kokoa ny manamboatra sy manapaka ary maharitra ela kokoa noho ireo marbra na vy ireo. Mba hananana sary an-tsaina ilaina amin'ny asany, ny mpanao majika antsika dia tsy maintsy mametraka ny sainy amin'ny zavatra homeny endrika ara-batana. Tsy maintsy manao ny sariny izy. Izany dia ataony amin'ny fitazonana ny sainy azy amin'ny endrika mandra-pahatongany ho sary ho azy, izay tokony hiantsoany azy indray amin'ny fisainana. Rehefa manam-pinoana izy ary afaka manao sary araka ny sitrapony dia manana izany koa. Izany hoe afaka miantso ny fanampiana hanampy azy amin'ny asany izy. Ny sitrapo na aiza na aiza ary tahaka ny herinaratra dia vonona foana ny hanome ny heriny ho an'izay manome ny sehatry ny asa ataony ary iza no afaka mampifandray izany amin'ny saha.
Ny hetsika rehetra milomano dia azo faritana amin'ny fahitsiana matematika; na izany aza, raha manandrana hanaraka torolàlana ny olona iray ao anaty rano fa tsy mino ny fahafahany milomano ary tsy mihevitra ny tenany hilomano rehefa manao mihetsika, dia tsy te hilomano izy. Misalasala ary avy eo matahotra azy ny tahotra, ka milentika izy. Ao anatin'ny fiezahana handeha amin'ny tady matevina iray, ny olona tsy manam-pinoana fa afaka mandeha aminy ary tsy mieritreritra ny tenany eo amin'ny tady sy mandeha amin'ny tady matevina hianjera, ary izy no nataony. Ny tsy fahaizan'ny lalàna momba ny gravitation sy ny fizika dia tsy hitazona azy izany. Ny finoana mampiseho azy ny fomba. Ny fisaintsainana dia mitazona azy eo amin'ny tady. Hanome azy ny hery handeha. Raha mbola maka sary an-tsaina ny tenany eo amin'ny tady izy ary mitohy ny fatokisany dia tsy afaka hianjera. Fa raha tokony hiova ny fisainany, ary raha tokony hieritreritra izy na dia lavo aza, dia tsy ho voalanjalanja ilay sary izay nataony tamin'ny fahalavoana.
Miaraka amin'ny finoana sy ny sitrapo ary ny saina, ny olona iray dia afaka mamokatra amin'ny alalan'ny tanany ny fisehoan-javatra ara-batana amin'ny alalan'ny dingana majika. Indro misy ohatra: Tsy maintsy tazonina na alaina sary an-tsaina ilay endrika, mba hahatonga azy ho hita maso. Ny ranon-javatra mihodinkodina, tsy hita maso, dia tsy maintsy fehezina mandra-pahatongany ho raikitra sy ho mafy orina. Asa ho an'ny saina izany. Afaka atao amin'ny tanana manodidina sy amin'ny endrika irina ny passage. Amin'ny fihetsehan'ny tanana manodidina ny endrika, ny zavatra singa dia voasintona sy midina amin'io endrika io ary, tsikelikely, miaraka amin'ny fitohizan'ny rotsak'orana, dia lasa hita maso sy ara-batana ilay endrika. Izany dia atao amin'ny alalan'ny herin'ny finoana, izay mampahafantatra ny lalàna mifehy ny zavatra fototra sy ny fomba hanolorana azy ho endrika. Ny sitrapo no mampindrana ny hery hanaovana izany rehetra izany ary izy no ivon'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Ny eritreritra no mpitari-dalana izay mahatonga ny sitrapo hanambatra na hanambatra ny singa fototra sy hampisy azy. Raha mikorontana ny eritreritra amin'ny asa dia mijanona ny asa. Raha tsy miova ny eritreritra dia ho vita amin’ny sitrapo ny asan’ny saina sy ny finoana. Ny endrika dia natao ara-batana, ary mitovy habe sy loko irina. Ny zavatra kely, toy ny vato na kristaly na vatosoa, dia azo amboarina amin'ny fametrahana ny tanana havanana eo amin'ny ankavia, ny afovoan'ny felatanana mifanandrify. Avy eo dia tsy maintsy alaina sary an-tsaina ny vato na vatosoa na kristaly ary tsy maintsy tazonina ao an-tsaina izany sary izany ary sitrana ny rotsak'orana. Ny andriamby amin'ny tanan'ny mpandraharaha dia ny tany izay manomboka mitombo ny sarin'ny kristaly na vatosoa, toy ny mikraoba na voa. Miaraka amin'ny hery andriamby eo anelanelan'ny tanana, ny taratra na ny tara-pahazavana dia atao mba hidina ao amin'ny matrix ao an-tsaina, mandra-pamokarana ny vatosoa amin'ny habeny sy ny lokony ary ny famirapiratana. Ny endrika dia efa ary azo novokarina tamin'ny alàlan'ny dingana majika, saingy mora kokoa ny mividy ireo endrika irina amin'ny fomba mahazatra noho ny mandeha amin'ny fiofanana ilaina mba hamokarana azy ireo amin'ny fomba mahagaga. Fa tsara ho an'ny lehilahy ny manana finoana, mampivelatra ny sainy, mianatra ny fampiasana ny sitrapo. Ny fivoarana na ny fahazoana ireo hery mahagaga telo ireo dia hahatonga azy ho lehilahy. Avy eo izy dia afaka, saingy tsy azo inoana fa ho mpanamboatra vatosoa na endrika hafa amin'ny alàlan'ny dingana majika.
Ahoana no tokony hampiasan'ny tanana amin'ny fanasitranana ny vatan'ny vatany manokana na ny ampahany amin'ny vatana?
Tsy azo omena ny torolàlana izay mety amin'ny karazan'aretina rehetra, fa ny torolàlana dia azo omena fanampiana amin'ny fanasitranana ny aretin'ny lalampanorenana sy eo an-toerana, ary azo ampiharina amin'ny maro hafa. Tsara kokoa ho an'ireo izay manasitrana hahafantatra ny fototra vitsivitsy momba ny vatana sy ny toetrany mahery vaika, alohan'ny hanandrana fitsaboana magnetika, ny vatany na ny an'ny hafa.
Ny vatana ara-batana dia zavatra marobe arakaraka ny lalàna sasany, ny anjara tsirairay dia manatanteraka fiasa sasantsasany ary hanompo ny tanjona sasany, ho an'ny tombontsoan'ny besinimaro manontolo. Ny lamesa ara-batana dia raisina miaraka, amboarina ary tazomina, amin'ny alàlan'ny endrika magneto izay tsara ao anaty lamesa. Ny fiasa voajanahary eo amin'ny vatana ara-batana, toy ny tsindrona, fandevonan-kanina, fanandevozana, famongorana, ary ny hetsika mihetsiketsika rehetra, dia tarihin'ireo vatan'ny magneto ao anaty vatam-batana. Ny lalàna sasany dia mifehy ny fiasan'ny vatana rehetra. Raha mandika ireo lalàna ireo dia tsy maintsy misy ny aretina ara-batana. Ireo aretina ireo dia manaporofo fa nisy ny ratsy nataony, ary misy ny sakana na misy sakana maro eo amin'ny vatana izay manakana ny vatan'ny magnetic ho an'ny fifandraisana miray amin'ny faritra na ny asany, na misy fandaniana lehibe kokoa angovo noho ny loharanon-karena omeny. Ny vatan'ny magnetic dia bateria fitehirizan-tena izay ataon'izao fiainana izao. Ny vatan'ny magneto dia ny mazoto mampifandray ny fiainana manerantany amin'ny resaka ara-batana. Raha tsy misy vatana magnété, dia ho faty ny vovoka ara-batana.
Amin'ny fanasitranana ny aretina amin'ny alàlan'ny tanana, ny tànana havanana dia apetraka eo amin'ny handriny ary ny tanana havia amin'ny lamosin'ny loha. Rehefa avy nijanona tamim-pahanginana nandritra ny minitra vitsivitsy izy dia tokony hipetraka eo amin'ny tratrany sy ny tanana havia manohitra ny hazondamosina. Ao anatin'ny minitra vitsy dia tokony hapetraka ao an-damosin'ny lamosina sy ny felan'ny tànana havanana amin'ny foibeny ny tanana havia. Ao anatin'ny iray minitra na roa dia tokony ahetsiketsika moramora sy moramora amin'ny manodidina ny kibo rehetra ny tanana havanana — amin'ny lalana mandratra ny famantaranandro iray - sivy amby sivifolo ary avy eo dia entina any amin'ny toerany voalohany ary avela hijanona eo amin'ny telo eo ho eo. minitra. Ny tanana havia dia tokony hitozona, miaraka amin'ny palma ao ambanin'ny hazondamosiko, mandritra ny hetsika ataon'ny tanana havanana. Ny vatana dia tokony ho eo amin'ny toerana fanavaozana.
Raha ny fitsaboana any an-toerana, ny tànana havia dia tokony apetraka eo ambanin'ny ampiharina sy ny tànana havanana amin'ny ilany ankilany amin'ny lafiny iray ary avela hijanona eo amin'ny dimy minitra na mandra-pahatongan'ny fotoana tsapan'ny olona fa fotoana tokony hijanonana. . Ny fitsaboana eo an-toerana dia tokony hialoha lalana na manaraka ny fitsaboana amin'ny ankapobeny. Ny faritra ao amin'ny vatana dia mety ho voatsindrona, fa ny fikosoham-bary dia tokony ho malefaka. Ny fitsaboana henjana dia matetika manimba araka ireo fomba ireo.
Ny tànana ara-batana dia tsy mamokatra ny fitsaboana; ny endrika magnetika ao anaty tanana dia tsy mamokatra ny fanafody. Ny fanafody dia vokarina amin'ny fiainana an'izao tontolo izao, izay entina amin'ny endrika magnetika ao anaty vatana ara-batana amin'ny alàlan'ny tanana. Ny tanjon'ny fametrahan-tanana amin'ny vatan'ny olona dia ny mitondra fiainana an'izao tontolo izao amin'ny endrika magneto ary ny fanamafisana ny endrika magnetika mba hahafahany mahazo sy mitahiry ary hifandray mivantana amin'ny fiainana iraisana. Amin'ny fikarakarana ny vatan'ny tenany na ny vatan'ny olona iray hafa dia tokony ho takatra tsara fa ny saina dia tsy misy fanasitranana, ary ny saina dia tsy tokony hanandrana mitarika ny fiainany na hanelingelina ny fivoahany amin'ny fomba rehetra. Raha misy olona tsy afaka mitadidy ny sainy amina toe-tsaina milamina sy milamina, ka tsy hanelingelina ny fanasitranana dia aleo tsy manaraka ny fomba fanao eto. Ny fikasan'ny saina hitarika ny fitsaboana ankehitriny dia manimba ny ampahany lehibe amin'ny vatana mba hanomezana fahafaham-po kely. Saingy raha ny tena izy dia simba daholo ny faritra rehetra. Tsy fanahin-tsaina na fanasitranana ara-tsaina izany. Ity fitsaboana magnetika ity araka ny voalaza dia hanentana ny vatana magneto amin'ny fanavaozana hetsika ary ny fiainana manerana izao tontolo izao dia hameno azy io. Mba hampisy fanafody sy fihazonana tsara ny vatana, ny vatana dia tokony homena sakafo izay hitan'ny olona fa mila manamboatra sy mihazona ny rafiny, ary tsy maintsy ajanona daholo ny fako na fandoaka ny vatana.